3 နေ့ခင်းဘက်အေးစေရန် လက်မှုပညာ | လက်မှုပညာ On
ချမ်းအေးတဲ့နေ့ခင်းတွေမှာ လက်မှုပညာ ၃ ခု
ဂျဲနီရေတွင်း | | လက်မှုပညာ, ကလေးများအတွက်လက်မှုပညာများ, ပြန်လည်
အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ! ဒီနေ့ဆောင်းပါးမှာတွေ့ရလိမ့်မယ် အအေးလည်း နီးလာပြီဆိုတော့ လုပ်စရာ လက်မှုသုံးမျိုး. သူတို့သည် မိသားစုလိုက် ဖျော်ဖြေရန် နာရီအနည်းငယ် သုံးစွဲရန် သင့်တော်ပါသည်။
ဤလက်မှုပညာကို အဆင့်ဆင့်လုပ်ဆောင်ပုံကို အောက်ပါဗီဒီယိုတွင် ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
အောက်တွင် သင်တစ်ဦးချင်းကြည့်လိုလျှင် လက်မှုပညာများကို သင်တစ်ဦးချင်းစီ ပြသထားပါသည်။
1 အကောင်းစား # 1: ချစ်စရာ မှို
2 လက်ရာ # 2- ကတ်စတော့ဖြင့် ဥဒေါင်း
3 ယာဉ်အမှတ် ၄ - ဥဖလားပါသောငါး
အကောင်းစား # 1: ချစ်စရာ မှို
ဤလက်ရာသည် ပြီးပြည့်စုံသောကြောင့် ပြုလုပ်ရန် အလွန်ရိုးရှင်းသောကြောင့် ၎င်းသည် ဖျော်ဖြေမှုဖြစ်ပြီး မည်သည့်စာအုပ်စင်ကိုမဆို အလှဆင်နိုင်သည်။ ထို့အပြင်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ထိပ်တွင် ကြိုးတစ်ချောင်းကို ချိတ်ထားလျှင် ခရစ်စမတ်သစ်ပင်ပေါ်တွင် ချိတ်ဆွဲထားနိုင်သည်။
ဤလက်ရာကို တစ်ဦးချင်းပြုလုပ်နည်းကို အောက်ပါလင့်ခ်တွင် ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။ ကြက်ဥပုံးနှင့်အတူမှို
လက်ရာ # 2- ကတ်စတော့ဖြင့် ဥဒေါင်း
ဒီလက်ရာက လုပ်ရတာ ရိုးရှင်းပါတယ်၊ အိမ်မှာ ရှိတဲ့ စက္ကူ ဒါမှမဟုတ် ကတ်ထူပြားတွေပဲ လိုပါလိမ့်မယ်။ အထူးတလည်ဝယ်စရာမလိုပါ၊ မဂ္ဂဇင်းစက္ကူကိုသုံး၍ ဒေါင်း၏အစိတ်အပိုင်းများကို acrylic ဖြင့်ဆေးခြယ်နိုင်သည်။
ဤလက်ရာကို တစ်ဦးချင်းပြုလုပ်နည်းကို အောက်ပါလင့်ခ်တွင် ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။ ကတ်ထူပြားနှင့်အတူဒေါင်း
ယာဉ်အမှတ် ၄ - ဥဖလားပါသောငါး
ဒီလက်ရာကို ကြက်ဥခွက်တွေနဲ့လည်း ပြုလုပ်ထားတာကြောင့် ပစ္စည်းတွေကို ပြန်သုံးပြီး တစ်ချိန်တည်းမှာ ပျော်ပျော်ပါးပါး လုပ်နေပါတယ်။ ဒီငါးရဲ့ ကောင်းတဲ့အချက်ကတော့ လူတိုင်းက ကြောင်ကို ပန်းချီဆွဲပြီး သူတို့နှစ်သက်တဲ့ ဆူးတောင်ပုံသဏ္ဍာန်ကို ရွေးချယ်ခြင်းဖြင့် အလှဆင်နိုင်ပါတယ်။ မင်းလုပ်သမျှငါးတွေထဲမှာ ဘယ်ငါးက မူရင်းအကျဆုံးလဲဆိုတာ မင်းဘယ်လိုထင်လဲ။
ဤလက်ရာကို တစ်ဦးချင်းပြုလုပ်နည်းကို အောက်ပါလင့်ခ်တွင် ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။ ကြက်ဥခွက်နှင့်ကတ်ထူပြားနှင့်အတူလွယ်ကူသောငါး
အဆင်သင့်။ အိမ်ရှိ ကလေးများနှင့် တွဲလုပ်ရန် ရွေးချယ်စရာ လက်မှုပညာ အများအပြား ရှိနှင့်ပြီးဖြစ်၍ ခရစ္စမတ် ဆိုးဆေးပါသော သရေစာနှင့်အတူ သူ့ကို လိုက်မပို့ပါနှင့်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - လက်မှုပညာ » လက်မှုပညာ » ချမ်းအေးတဲ့နေ့ခင်းတွေမှာ လက်မှုပညာ ၃ ခု
ခရစ္စမတ်သစ်ပင်ကိုအလှဆင်ရန် လက်မှုပညာများ ၁
လှပပြီး လွယ်ကူသော လက်မှုပညာ 15 ခု